‘Unfriend Day’ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အိမ်ရှင်းသည့်နေ့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒေါ်စု ကို ယုံယုံကြည်ကြည် ဝန်းရံလိုက်ကြစမ်းပါ
ဘီလျံနာ ဒေါနယ်ထရမ့်၏ မှတ်သားဖွယ်ရာ စာစုလေး »
I may be guilty of this two facts:
(1) နိုင်ငံရေးပြဿနာအ ကြောင်း အတင်လွန်သူများ၊
(2) စာ လုံးပေါင်းမစစ်ဘဲ ဖြစ်သလိုရေး တင်နေသူများ၊
This entry was posted on November 26, 2014 at 1:45 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.